Izinto Ezisimeme - I-Suzhou MENTIONBORN Industry And Trade Co., Ltd.
Nciphisa ukukhishwa kwe-carbon dioxide
Izinzuzo zokuvikelwa kwemvelo
Ukwamukelwa kokutholwa kwe- "ECO CIRCLE" kunganciphisa kakhulu umthwalo wezemvelo.
Ukulawula ukusetshenziswa kwezinsizakusebenza ezikhathele izinsiza
Ingalawula ukusetshenziswa kwezinto ezintsha zikaphethiloli ezi-oda i-polyester izinto zokusetshenziswa.
Ukunciphisa ukuphuma kwamagesi abamba ukushisa (i-CO₂)
Uma kuqhathaniswa nendlela yokulahla ukushisa, kunganciphisa ngokuphawulekayo ukukhishwa kwegesi lokushisa.
Imikhiqizo ye-polyester esetshenzisiwe ayisadoti kepha ingasetshenziswa kabusha ngempumelelo njenge- izinsiza. Kungenza umnikelo ekulawuleni i-
Akekho ofuna izimpahla ezindala anikele ngazo, futhi kuyadabukisa ukuzilahla. Uma ufuna ukunikela, awazi ukuthi uzonikela kuphi. Izingubo zabantu abadala eziningi zinqwabelana ngokwengeziwe, futhi kufanele ziphathwe njengodoti ngemuva kwesikhathi eside. Akugcini nje ngokubangela ukuchitheka kwezinsizakusebenza, kepha kungcolisa nemvelo. Ngokwezibalo, amathani wezingubo zokungcola angena endaweni yokungcwaba nsuku zonke, futhi imicu eyenziwe ngumuntu izohlala emhlabeni amakhulu eminyaka, ngaleyo ndlela ingcolise inhlabathi nemithombo yamanzi.
Ukwenza kabusha izingubo ezindala, ukukhuthaza ukusetshenziswa kabusha kwezinsizakusebenza, nokunciphisa ukungcoliswa kwemvelo kuyisiphambiso semisebenzi yakho ...
Usebenzisa imfucuza yezingubo, imvuthuluka nezinye izinto ezilahlwayo ze-polyester njengezinto zokuqala zokusetshenziswa, yehliselwa ku-polyester ngokubola kwamakhemikhali okuphelele, futhi yenziwa kabusha yaba yifayibha entsha ye-polyester esezingeni eliphakeme, esebenza kakhulu, elandelekayo futhi ehlala njalo. Umkhiqizo usetshenziswa kabanzi Emikhakheni yezingubo zemidlalo ezisezingeni eliphezulu, ukugqoka kahle, iyunifomu yesikole, imfashini yabesilisa neyabesifazane, izindwangu zasendlini nezingubo zokulala, izinto zangaphakathi ezimotweni, njll., Ngomqondo wangempela, ibona umbuthano ovaliwe nongunaphakade kusuka ezingutsheni ezingutsheni. Njengoba ixazulula ukuthi izindwangu zemfucuza zingaphinde zenziwe kabusha, kunciphise ukusetshenziswa kwezinsizakusebenza zikaphethiloli nokunciphisa imfucuza.
Ijakhethi Yezemidlalo, Izikibha zezemidlalo ezomile ngokushesha, Ukucubungula Kwesampula Nokukhiqiza, Amabhulukwe Ezemidlalo Okuvamile Kwabesilisa, Ingubo yeFlannel Emaceleni Amabili, Izikhindi Zabesilisa Ezomile Ngokushesha,